आमा ९ दिनमै बितेपछि होटलमा भाँडा माझेर अपाङ्ग छोरी हुर्काउने सहासी बाबुको जीवन कहानी यस्तो ! भिडियो हेरेर शेयर गरौं – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > आमा ९ दिनमै बितेपछि होटलमा भाँडा माझेर अपाङ्ग छोरी हुर्काउने सहासी बाबुको जीवन कहानी यस्तो ! भिडियो हेरेर शेयर गरौं
केही समय उनको यसैगरी बित्यो । तर एक दिन जव उनी छोरीलाई भेट्न आफन्तकोमा गए उनको आँखा अगाडीको संसार धमिलो भयो । सुन्दर छोरी जिम्मा लगाएर प्रति महिना पैसा समेत दिने गरेका आफन्तले उनको छोरीको पालन पोषण राम्रो संग गरेनछन् । अहिले उमेरले ११ वर्षकी भए पनि न उनी बोल्न सक्छिन् न त सुन्न नै । शरिर पनि अपागं जस्तो छ
“आफन्तलाई छोरी जिम्मा लगाएको थिएं, महिनामा ८ हजार रुपैया पनि दिन्थे तर मेरो छोरी बिगारी दिएछन्, उनले भने । त्यस्तो अवस्थामा उनलाई आफ्नी छोरी अरुको घरमा राख्न मन लागेन । ति भन्दा अघिका दुई छोरी विवाह गरेर आफ्ना आफ्ना घर गए छोरा मुग्लान पसे । तर शारिरिक रुपमा अशक्त छोरीको जिम्मा फेरी पनि उनकै कांधमा आयो । आफ्नै बस्ने ठेगान
नभएका राजकुमारलाई अब अर्काे समस्या छ । विरामी छोरीको उपचार गर्नु साथै पालन पोषण गर्नु । केही महिना अघि सम्म अर्काको क्रेसरमा काम गर्दै आएका राजकुमार अहिले लालगढ स्थित श्रेष्ठ स्टाप होटलमा भाँडा माझ्ने काम गर्छन ।
दिनभरी उनी होटलको काममा ब्यस्त हुदा छोरी फुलकुमारी होटल अगाडीको बाटोमा त्यसै भुइमा लडिरहेको अवस्थामा हुन्छिन् । मुखभरी झिँगा भन्केका हुन्छन् । तर त्यो झिँगा धपाउने चेतना पनि उनीसंग छैन ।
छोरीको भविष्यलाई लिएर निकै चिन्तित राजकुमार कसैले आर्थिक सहयोग गरे छोरीको उपचार गर्ने इच्छा ब्यक्त गर्छन । “छोरीको भविष्यको निकै चिन्ता लाग्छ, आफन्तको घरवाट ल्याए पछि अस्पतालमा देखाएं तर ठिक भएन, उनले भने राम्रो अस्पतालमा लैजाउँ भने म संग पैसा छैन, मलाई तल माथि केही भयों भने यो छोरीको अवस्था के होला सम्झँदा पनि मन कहालिन्छ ।”